အောင်မြင်တဲ့အလုပ်အင်တာဗျူးများအတွက်သိကောင်းစရာများ | USAHello | USAHello
သင်တစ်ဦးအလုပ်အင်တာဗျူးအဘို့ကိုဖိတ်ကြားရခဲ့ပါ? သငျသညျဖြစ်ကောင်းကောင်းစွာလုပ်နေတာအကြောင်းကိုဦးနှောက်အာရုံကြောများမှာ. သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားရန်ယူနိုင်ပါသည်ခြေလှမ်းများရှိပါတယ်. အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပါနှင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ထားရန်. အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးအတွက်ကောင်းစွာလုပ်နေတာတချို့အကြံပေးချက်များ Read.
တစ်ဦးကအလုပ်အင်တာဗျူးသင်နှင့်အလုပ်ရှင်အကြားတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်. အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, အလုပ်ရှင်သင်သည်များစွာသောမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအင်တာဗျူးအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိရန်လိုအပ်. ဒါဟာအလုပ်ရတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်.
အလုပ်ရှင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကသင့်ရဲ့ပညာရေးနှင့်သင်ခဲ့ကြပါပြီမည်သည့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပတ်သက်. သိလိုပါလိမ့်မယ်. မေးခွန်းများကိုအင်တာဗျူးရန်သင့်အဖြေကိုလည်းဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုပြသ. သင်အလုပ်ကောင်းတစ်ခုလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအလုပ်ရှင်ပြပါလိမ့်မယ်.
ယောဘသည်အင်တာဗျူးများအမြဲလူတစ်ဦးအတွက်နေရာမယူကြဘူး. သင်ပထမဦးဆုံးဖုန်းအင်တာဗျူးရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျကုမ္ပဏီ၏ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုပြသနိုင်ဖို့ဒီအခွင့်အရေးကိုသုံးပါ. သင်ဖုန်းကိုအင်တာဗျူးရှောက်သွားလိုလျှင်, ပြီးနောက်သင်လူတစ်ဦးအတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းလိမ့်မည်. များစွာသောအလုပ်အကိုင်များများအတွက်, သင်တဦးတည်းဖုန်းကိုအင်တာဗျူးနှင့်အနည်းဆုံး In-လူတစ်ဦးအင်တာဗျူးရပါလိမ့်မယ်. ဒါမှမဟုတ်သူတို့သင်နှင့်အတူဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုထူထောင်စခွေငျးငှါ.
သင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သတင်းအချက်အလက်မှတဆင့်ဖတ်နိုင်. သင်တို့အပေါ်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်လည်းရှာဖွေနိုင်သည် LinkedIn တို့. ဤမေးခွန်းများကိုဖြေကိုရှာဖွေ:
Google တွင်ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်အဘို့အရှာရန်ပြီးတော့ "သတင်း" ကိုနှိပ်ပါ. သငျသညျအကောင်းသတင်းကိုမြင်ရပါလျှင်, သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးထဲမှာဖော်ပြနိုင်ပါတယ်.
ကုမ္ပဏီအပေါ် Find မှန်တံခါး, ဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောဆိုဘယ်မှာ website တစ်ခုဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အများပြည်သူနေရာအရပ်င် အကယ်., ထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်အဖြစ်, အတွက်သွားနှင့်အလည်အပတ်ခရီး. သင်သည်သင်၏သုတသေနပွုအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးတွင်မေးနိုငျအချို့မေးခွန်းများကိုစဉ်းစားစတင်ရန်နှင့်သူတို့ချရေး.
အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်ပိုမိုယုံကြည်မှုခံစားရပါစေနဲ့သင့်ရဲ့အင်တာဗျူး၌သင်တို့ကိုကောင်းစွာလုပ်ဖို့ကူညီပေးပါမည်. အများအပြားအလုပ်ရှင်များကိုမေးကြောင်းအလုပ်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်. မေးခွန်းများကိုဖတ်ရန်နှင့်ကောင်းသောအဖြေကိုပေးဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့.
သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက် လုပ်. စေလွှတ်ပြီ. အလုပ်ရှင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဘာမှအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်မမေးပါလိမ့်မယ်. သင်အင်တာဗျူးရှေ့၌သင်တို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်အရေးကြီးသည်က. သင်အတိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်များအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီများဖော်ပြရန်နိုင်ဖြစ်သင့်. အလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်အကြံပြုချက်များကို Read.
အကောင်းတစ်ဦးဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်းအချိန်ပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လာမယ့်ဆိုလိုတယ်. အချိန်ပေါ်ဖြစ်ခြင်းကို USA အတွက်အလွန်အရေးပါသည်. သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးမှလာမယ့်လနှောင်းပိုင်းသင်ငှားရမ်းထားနေကြသည်လျှင်သင်အလုပ်အတွက်နှောင်းပိုင်းကဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအင်တာဗျူးကိုပြသ. ဒါဟာသင်အကြီးအအလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်လျှင်ပင်ငှားရမ်းထားခံသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကိုလျှော့ချပေးမည်.
မျက်စိရှိလူများပြုံးနဲ့ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ. ဒါဟာသင်အပြုသဘောနှင့်ဖော်ရွေများမှာအင်တာဗျူးကိုပြသ. ဒီကသင်၏ယဉ်ကျေးမှု၌ထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပေမဲ့, ဒါကြောင့်သင်ကအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလုပျနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. အမေရိကန်များအတွက်, မျက်လုံးချင်းအောင်လေးစားမှုကိုပြသခြင်းနှင့်လူဦးသင်ယုံကြည်ကူညီပေးသည်. သင်အင်တာဗျူးမှာရောက်လာသည့်အခါ, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလူများကရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်စေခြင်းငှါ. သငျသညျတွေ့ဆုံရန်လူတိုင်းယဉ်ကျေး Be လူတိုင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပြုံးဖို့ကြိုးစား.
သင့်ရဲ့အလုပ်အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, လျှော့ပေါ့ခံရဖို့ကြိုးစား. မလွယ်ကူဘူး. သစ္စာဝါဒီဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်သတိပေးပါ, သဘာဝက, နှင့်စိတ်အားထက်သန်. သင်သိတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေကြ, သငျသညျအမှားအောင်အကြောင်းကိုဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ရန်မလိုပါ.
လက်ဆွဲ America မှာဘုံများမှာ. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအချင်းချင်းလက်တို့ကိုလှုပ်ခါရန်အဘို့အဒါဟာ ok ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျလကျကိုလှုပ်ချင်ကြပါဘူး အကယ်., ကြောင်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. အစား, သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်၏လက်ကိုနေရာချခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ရှေ့သို့သင်၏ခေါင်းကိုစောင်း. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ, "ဒါဟာသင်တွေ့ဆုံရန်ဒါကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ယနေ့ငါအင်တာဗျူးဖို့အချိန်ယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "တချို့လူတွေကသငျသညျလကျကိုမျှဝေချင်မအံ့သြသွားစေခြင်းငှါ. သငျသညျအဆင်ပြေခံစားရလျှင်, ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူတို့လက်လှုပ်သင့်ရဲ့ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းရှင်းပြ.
သငျသညျစာတစ်စောင်အဖြစ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်သင်သည်သတိပြုပါတစ်ဦးကျေးဇူးပေးပို့နိုင်ပါတယ်. လူအများစုဟာအီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်ကိုတောင်းဖို့မေ့လျော့နေလျှင်, သငျသညျအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်မခေါ်ရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်.